Sunday March 25, 2018 - 12:20:15 in Wararka by Super Admin
Ciidamada Xabashida Itoobiya ee xoogga ku jooga deegaanno katirsan gobollada Bay iyo Bakool ayaa bilaabay in si rasmi ah dhulalka ay qabsadeen u hoos geeyaan dowladda Itoobiya.
Deegaanka Caato ee gobolka Bakool ayaa la sheegay in dowladda Itoobiya ay ku darsatay dhulkeeda waxayna meesha ka saartay dhammaan astaamihii muujinayay in deegaankan kamid yahay dalka Soomaaliya.
Max'med Iidle Geedo Xeroow oo horay uga mid ahaa xildhibaannada Baarlamaanka dowladda Federaalka oo dhowwaan booqasho ku tagay deegaanka Caato ayaa sheegay in uu kusoo arkay wax uu layaabay.
Wuxuu sheegay in dowladda itoobiya ay deegaanka ka hirgelisay saldhig ciidan,xarunta degmada iyo isbitaal dhammaantoodna ay ku xardhanyihiin astaamada dowladda Itoobiya.
"arrintan aan kusoo arkay xuduuddaBakool waa wax lala maroora dillaaca mana jirto cid wax ka qabanaysa, deegaanka Caato oo kale dowladda Itoobiya ayaa si toos dalkeeda ugu darsatay" ayuu yiri Max'med Iidle Geedo Xeroow.
Ganacsato deegaanka ah ayaa iyana warbaahinta u sheegay in dowladda Itoobiya ay keensatay guddoomiye iyo shaqaale katirsan dowladda hoose ee dhulka Somaligalbeed ee gumeysiga kujira.
Xildhibaan Xeroow ayaa booqday deegaanka Caato
Lacagta Birta loo yaqaan ee Itoobiya caanka ku tahay ayaa ah waxa kaliya ee dadku wax ku kala iibsanayaan, ciidamo Boolis iyo sirdoon ah oo Addis Ababa laga keenay ayaa deegaanka Caato maamulaya.
Degmada Ceelbarde ayaa iyana leh guddoomiye degmo oo dowladda Itoobiya soo magacaawday waxaana lafilayaa in sanadada soo socda dowladda Itoobiya ay wadankeeda ku darsato deegaanno katirsan Hiiraan iyo Bakool haddii aan layska difaacin.
Xarakada Al Shabaab ayaa ah cidda kaliya ee Xabashida Itoobiya iyo Kenya ka difaacaysa diinka dalka iyo dadka, Itoobiya ayaa ah cadaw soo jireen ah oo ay leeyihiin muslimiinta geeska Afrika gaar ahaan shacabka Soomaalida.